Mayelana NATHI - I-Tianjin Honest Tech. Co., Ltd.
I-Tianjin Honest Tech. Co., Ltd.
I-Tianjin Honest Tech. I-Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2014, ongumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela izinto kwamanye amazwe obhekene nokuklama, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqizwa KOKUVIKELWA KWOMZIMBA, AMAThawula namalambu e-LED. SiseTianjin, okungenye yetheku elikhulu kunawo wonke enyakatho yeChina. Yonke imikhiqizo yethu ihambisana namazinga ekhwalithi aphesheya futhi ayaziswa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Izikhungo zethu ezihlome kahle nokulawulwa kwekhwalithi okuhle kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele.
Eminyakeni embalwa edlule yokukhiqiza nokuphatha nokuhlola, i-Honest isungule uhlelo lwayo lokuphathwa kwekhwalithi. Ihenjisi elithembekile eminyakeni edlule belilokhu linamathele "ukubeka abantu phezulu, ukubhekana nabantu ngokwethembeka" izinhloso zebhizinisi. Uzibophezele ukukunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezisezingeni. Iba neqembu lobungcweti, elizinikele ekuphathweni kwedizayini, esicini ngasinye nasezinhlelweni zivivinya kanzima futhi zilawule.
Ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye namakhasimende avelele, sizuze inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela eBrithani, eMelika, eJapane, eJalimane, eSpain, e-Italy, eSweden, eFrance naseRussia, njll.
Ibhizinisi lethu eliyinhloko lifaka ukuvikelwa komzimba, amathawula namalambu eLed. Singakunikeza nge-brace yangemuva, ukwesekwa okhalweni, ukwesekwa ngamadolo, ukwesekwa kweqakala, ithawula lokugeza, ithawula lokuhlanza imoto, ukusula izinwele ngokushesha, ithoshi, ilambu, isibani sebhayisikili, ukukhanya kwe-diving, njll. Futhi uma ungatholanga imikhiqizo onentshisekelo kuyo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, futhi sizojabula ukukusiza.
Uma unesithakazelo kunoma imiphi imikhiqizo yethu noma ungathanda ukuxoxa nge-oda langokwezifiso, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.